अझै पनि किन जाग्दैन पोखरा ? — samadhannews.com
अझै पनि किन जाग्दैन पोखरा ?
पोखराको आवश्यकता रात्रीबस, दर्ता छैनन् होटल रेस्टुरेन्ट
पाेखरा, २ मंसिर:
बागलुङको बुर्तिवाङबाट काठमाडौं जाने रात्रीबस २ बजे राति पोखरा आइपुग्छ । ९–१० बजे नै सुनसान देखिने पोखरामा खाजा खाने रेस्टुरेन्ट समेत भेटिँदैन । पोखरा बस्न चाहनेको लागि होटल पाउनु असम्भवप्राय हुन्छ ।
काठमाडौंबाट पोखरा हुँदै स्याङ्जा, बागलुङ, बेनी जाने रात्रीबसका यात्रु भोक मेट्न पोखरा पर्खदैनन् । पोखरा झर्ने यात्रु आफन्त बोलाउछन् । आफन्त नहुनेहरु ट्याक्सी भाडा डबल तिरेर लेकसाइड पुग्छन् । पर्यटकीय सहरको परिचय पाएको पोखरा रातभर जाग्दैन ।
तीन वर्ष अघि तत्कालीन पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख राजेन्द्रसिंह भण्डारीले लेकसाइडलाई चौबिसै घन्टा खोल्ने घोषणा गरे । लेकसाइडको पर्यटन प्रवद्र्धनमा उनको घोषणा स्वागतयोग्य थियो । तर त्यो घोषणाले लेकसाइड केन्द्रित पर्यटनलाई झन बढावा थियो, जबकि लेकसाइड बाहिरका व्यवसायी विकेन्द्रीकरणको पक्षमा थिए ।
पृथ्वीचोक, चिप्लेढुंगा, महेन्द्रपुल, न्युरोड, नयाँबजार, जिरोकिलोमिटर लगायत क्षेत्रका व्यवसायीले आफूमाथि प्रशासनले ‘सौतेलो’ व्यवहार गरेको अनुभूत गरे । अहिले पनि लेकसाइड राति १ बजेसम्म जाग्छ तर अन्यत्रको बजार ९ बजे बन्द हुन्छ । लेकसाइड बाहिर क्याफे, रेस्टुरेन्ट, मदिरा पसल ९ बजे र होटल ११ बजे बन्द गर्नुपर्ने प्रशासनको उर्दी छ । दोहोरी रेस्टुरेन्ट र गजलमा ११ बजे संगीत बन्द हुन्छ, पौने १२ बजे बार । त्यसो त, रात्री व्यवसाय खुल्ने र बन्द गर्ने समय सधैं एकनास हुँदैन । यहाँ सुरक्षा र प्रशासन प्रमुख फेरिदाँ खुल्ने र बन्द गर्ने समय पनि फेरिन्छ ।
प्रहरी प्रमुख फेरिँदा फेरिने समयसीमाको विरोधमा पटक पटक आन्दोलन गर्नुपरेको सिटी रेवान पोखरा अध्यक्ष केपी शर्मा पाध्याय सुनाउँछन् । सिटी रेवानमा लेकसाइड बाहिर सृजनाचोक, सभागृहचोक, न्युरोड, चिप्लेढुंगा, महेन्द्रपुल, नयाँबजार, पृथ्वीचोक क्षेत्रका होटल, क्याफे, रेस्टुरेन्ट, दोहोरी, गजल रेस्टुरेन्ट आवद्ध छन् । सिटी रेवान अध्यक्ष पाध्याय समस्याको जड समयसीमामा एकरुपता नहुनुलाई देख्छन् ।
भन्छन्, ‘प्रशासनिक क्षेत्रबाट लेकसाइड र सिटीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता छ ।’ उनी लेकसाइडलाई चौबिसै घन्टा खोल्न दिइएकोमा विरोध गर्दै गर्दैनन् बरु पर्यटकीय नगरीका रुपमा अन्यत्र पनि चौबिसै घन्टा खुल्न दिनुपर्छ भन्छन् । ‘हो, लेकसाइड आफैमा सुन्दर छ, विदेशी पर्यटक त्यहाँ धेरै पुग्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आन्तरिक पर्यटकलाई सेवा दिने सवालमा सिटीको भूमिका पनि कम छैन ।’
पोखरामा ठूला सभा, सम्मेलन, महाधिवेशन हुँदा सिटीले पाहुना थेग्छ । तर प्रशासनले तोकेको समयसीमामा बाँधिनुपर्दा पाहुनालाई खुसी बनाउन सकस हुन्छ । यो कुराको चाल पाउने पाहुना सिधैं लेकसाइड हानिन्छन् । प्रशासनको विभेदको असर सिटीका व्यवसायीले खेप्छन् ।
‘हामीले सरकारलाई कर तिरेका छौं,’ अध्यक्ष उपाध्याय भन्छन्, ‘समाजलाई अप्ठेरो पर्ने र कानुनले बन्देज गरेका क्रियाकलाप गरेको छैन भने प्रशासनले सबै व्यवसायीलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ ।’ उनी महानगरपालिकाभित्र एउटै नियम बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । त्यसो गर्दा कुनै निश्चित ठाउँको मात्र नभै पोखराको चौतर्फि विकास हुने उनको मत छ ।
सिटी रेवानका महासचिव दीपक तिमिल्सिना पनि पर्यटकीय सहर रातभर खोल्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनी भन्छन्, ‘पोखरामा जतिबेला आउँदा पनि भोको रहने र बास नपाउने जस्ता नराम्रा सन्देश जानु हुँदैन ।’ तिमिल्सिनाले सुरक्षाको दृष्टिकोणले प्रशासनको आग्रहमा पटक पटक समयसीमा अगावै व्यवसाय बन्द गरेको उदाहरण दिए । उनी मदिरालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर सबै सरोकारवाला बसेर टुंग्याउनुपर्ने धारणा राख्छन् ।
लेकसाइड र सिटीमा सञ्चालित रेस्टुरेन्टमा उस्तै परिकार पाक्छन् । होटलले दिने सेवा उस्तै हुन्छन् । कर्मचारीको तलब, सेवा सुविधा उस्तै हुन्छन् । दुबैतिर व्यवसाय अनुसारको कर तिर्छन् । तर सिटी र लेकसाइडलाई प्रशासनले दिने सुरक्षा प्रबन्धमा भने विभेद छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनाली सिटी र लेकसाइडलाई विभेद गरेको स्विकार्दैनन् । सुरक्षाको दृष्टिकोणले गर्दा समयसीमा निर्धारण गर्नुपरेको उनी बताउँछन् । ‘जति पनि आपराधिक क्रियाकलाप भएका छन् ती रातमै भएका छन्,’ मैनाली भन्छन्, ‘अहिलेलाई चौबिसै घण्टा खोल्ने अनुमति दिन सक्दैनौं ।’ उनले सिटी र लेकसाइडमा बराबर सुरक्षा सतर्कता अपनाएको दाबी गर्छन् ।
पोखराको आवश्यकता रात्रीबस
पोखरा भित्र चल्ने सार्वजनिक यातायात गर्मी महिनामा सामान्यतया ७ बजे र हिउँदमा ६ बजे बन्द हुन्छन् । त्यसको प्रत्यक्ष मार होटल तथा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने मजदुरलाई पर्छ । सिटी क्षेत्रका होटल तथा रेस्टुरेन्टमा मात्रै करिब ४५ सय कर्मचारी छन् । सबै होटल कर्मचारीलाई यातायातको सुविधा दिनसक्ने क्षमताका छैनन् ।
कम्तीमा राति १० बजेसम्म यातायातको व्यवस्था हुने हो भने अन्य पेशा व्यवसायमा आवद्ध र आफ्नै साधन नभएकाहरु पनि लाभान्वित हुनेछन् । लेकसाइडमा हुने विभिन्न महोत्सवहरु रातभर चल्छन् । ती महोत्सव अवधिभर राति १२ बजेसम्म नगर बस गुड्छन् । त्यस बाहेक पोखरामा हालसम्म नियमित रात्रीबस चलाउने प्रयासको थालनी भएको छैन ।
रात्रीबस चल्न सके पोखराका हजारौं सर्वसाधरण लाभान्वित हुने सिटी रेवानका अध्यक्ष केपी शर्मा उपाध्याय बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘रात्रीबस चल्ने हो भने सिटीमा लगानी गर्नेहरुको पनि हौसला बढ्थ्यो ।’
दर्ता छैनन् होटल रेस्टुरेन्ट
सिटी रेवान महासचिव दीपक तिमिल्सिनाका अनुसार पोखराका २५ प्रतिशत होटल रेस्टुरेन्ट विना दर्ता सञ्चालन भइरहेका छन् । महासचिव तिमिल्सिना त्यस्ता व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘यसको लागि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले पनि पहल गरिरहेको छ, हामी पनि सहयोग गर्छौ,’ उनी भन्छन् । दर्ता नगरी व्यवसाय चलाउँदा दर्ता गरेकालाई प्रत्यक्ष असर पर्छ । दर्ता नगर्ने व्यवसायी आफैले पनि बुझ्नुपर्ने पक्षमा तिमिल्सिना छन् ।
महानगरका नयाँ कार्यकारी भन्छन्ः गर्छु भनेपछि गरेरै देखाउने स्वभाव छ
कति तिर्न सक्नुहुन्छ ? पाेखरामा पाइन्छन् पैसा अनुसार मजदुर, कलेज गर्लदेखि सेलिब्रिटीसम्मका यौनकर्मी
महानगरको द्रुतमार्गमा पाेखरा लेखनाथकाे यात्रा